Global Voices teny Malagasy » Sary-sy-Soratra Hiarovana Ny Fitenim-paritra Berrichon-Bourbonnais · Global Voices teny Malagasy » Print
Sary-sy-Soratra Hiarovana Ny Fitenim-paritra Berrichon-Bourbonnais
Voadika ny 24 Febroary 2017 5:34 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika (fr) i Gwenaëlle Lefeuvre, Liva Andriamanantena
Hatsikana noforonin'i Pierre-Marie Chevreux amin'ny teny berrichon. (Dikanteny: ” Inona no tsy tokony hatao mba hanohanana ny teniny ? Tena marina e !”)
Mandray anjara amin'ny Fanamby sary-sy-soratra amin'ny fitenindrazana  i Pierre-Marie Cheuvreux ary namorona sary-sy-soratra amin'ny teny berrichon-bourbonnais .
Mpampianatra ao Lyon, avy any afovoantanin'i Frantsa i Pierre-Marie, ary mipetraka any Berry sy Bourbonnais teo aloha ny fianakaviany (ny departemantan'i Allier sy Cher amin'izao fotoana no misy izany), izay mbola handrenesana ny teny berrichon sy Bourbonnais. Manana fiaviana avy amin'ny teny Latina  ireo fiteny romana  roa fahiny ireo. Hita ao amin'ny literatiora io teny io, ary ampiasain'ireo mpilalao amin'ny tantara foronina maro, toy ny an'i George Sand . Amin'izao fotoana izao , ireo olona enim-polo taona mahery no tena miteny sy mampiasa azy io, ary soa fa nisy ny ezaka famelomana azy indray.
Mihahita hatrany ao amin'ny Aterineto ity teny ity, ankoatra ny bilaogy  roa izay novelomin'i Pierre-Marie amin'ny teny berrichon efa voarafitra, dia mandray anjara mavitrika ao amin'ny Fanamby sary-sy-soratra amin'ny fitenindrazana ihany koa izy. Niresaka momba ny fandraisany anjara amin'ny Fanamby izy eto, izay namoahany ny sary-sy-soratra tao amin'ny kaontiny @Persian_Coral  .
Rising Voices (RV): Ahoana ny satan'ny teninao eo amin'ny fiainana andavanandro, sy ao amin'ny Aterineto?
Pierre-Marie Cheuvreux (PMC): Namorona tranonkala maro ireo olona nanana zotom-po ary namoaka rakibolana, fehezanteny sy fitsipi-pitenenana ihany koa. Misy lahatsary mihitsy aza ao, toy ny olona manao tantara amin'ny teny berrichon na manao tantara tena mahatsikaiky. Ilay teny mihitsy aza moa no mahatsikaiky raha ny marina, izay efa hatry ny ela no lazaina ho “teny Frantsay ratsiratsy “. Noheverina ho karazana teny kiriolona ity “tenin'ny tantsaha mitoka-monina ” ity.
RV: Nahoana ianao no nanapa-kevitra ny handray anjara ao amin'ny Fanamby sary-sy-soratra amin'ny fitenindrazana?
PMC: Nahatsikaritra sary-sy-soratra tamin'ny teny gallo tao amin'ny Twitter aho (fiteny romana iray hafa fa avy any Haute-Bretagne). Efa ho telo taona izay no nahaliana ahy tamin'ny fampiroboroboana ny fiteniko, ary maniry ny hianatra bebe kokoa momba ireo mifandraindraika amin'ny fiteniko aho. Mino aho fa fomba tsara iray hisarihana ny sain'olona ny sary-sy-soratra. Ary fahafahana iray ihany koa izany mba ahitana ny teny Amerindianina toy ny teny tsimshian ( fiteny manamorona ny sisin-tany anelanelan'i Alaska sy ny morontsirak'i Kolombia Britanika) sy ny teny astoriana (any avaratra-andrefan'i Espaina) .
RV: Iza no tianao hanipazana ny fanamby mba hamoronana sary-sy-soratra amin'ny teny berrichon ?
PMC: Sehatra mahomby ny media sosialy ary mamela ny teniko, ny berrichon-bourbonnais, mba ho fantatra bebe kokoa tsy araka izay noeritreretiko. Tsy mahafantatra ny olona fa misy izany ao Frantsa, indrindra any avaratra sy afovoan'ny Frantsa , tokony ho roapolo eo ho eo ny isany! Noho izany, te-hanaitra sy sy hisarika ny saina amin'ny teniko nivoaka vanim-potoana antenantenany aho.
Mijere sary-sy-soratra maromaro kokoa mandray anjara amin'ny fanamby amin'ny fiteny isan-karazany manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fikarohana ny tenirohy #MemeML ao amin'ny Instagram , Twitter , na Facebook . Manana ny vondrony ao amin'ny Facebook  ihany koa ny Fanamby ary mandray ny fandraisana anjara manerana izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/24/95594/
 Fanamby sary-sy-soratra amin'ny fitenindrazana: https://memelanguematernelle.wordpress.com/
 teny Latina: https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin_vulgaire
 fiteny romana: https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_d%27o%C3%AFl
 George Sand: https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand
 vondrony ao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/groups/mememl